Promo.com: Mpanonta horonantsary an-tserasera tsotra momba ny horonantsary media sosialy sy doka ara-tsosialy | Martech Zone
Promo.com: Mpanonta horonantsary an-tserasera tsotra ho an'ny horonantsary media sosialy sy doka ara-tsosialy
Alatsinainy, 24 Jona, 2019 Asabotsy 27 Febroary 2021 Douglas Karr
Na mamoaka feo na horonan-tsary ianao dia fantatrao fa indraindray io atiny io no ampahany mora indrindra. Manampia fanovana sy fanatsarana ho an'ny sehatra sosialy tsirairay ary mandany fotoana bebe kokoa amin'ny famokarana ianao noho ny amin'ny firaketana. Izany tsy fanelingelenana izany no mahatonga ny orinasa maro hisoroka ny horonantsary na dia eo aza ny zava-misy fa fampitaovana maharesy lahatra ny video.
Promo.com dia sehatra famoronana horonan-tsary ho an'ny orinasa sy ny masoivoho. Manampy ireo mpampiasa izy ireo hamorona atiny hita maso be dia be sy horonan-tsary tsy voafetra mba hampiroboroboana izay rehetra tadiaviny amin'ny fomba mandaitra. Ny sehatra fanovana horonantsary an-tserasera mora ampiasaina dia ahafahan'ny mpampiasa manamboatra horonantsary feno fonosana ataon'ny mpamorona nahazo loka - ary misy ny famoronana doka, kopia ary mozika mifanentana.
Ny ekipa ao amin'ny Promo.com dia namela ahy hamoaka ity horonan-tsary fohy ity izay naka ahy minitra vitsivitsy monja. Ireo sary sy sary ary mozika amin'ny tahiry dia azo alaina amin'ny alàlan'ny modely nofidiko.
Ny tsara indrindra, ny sehatra dia namorona fomba fijery voaatsara ho an'ny Instagram ary koa horonantsary mitsangana. Nanao fanitsiana madinidinika tamin'ny endri-tsoratra aho, saingy roa segondra monja!
Amin'ny fampiasana Promo.com, azonao atao ny mamorona doka video na video, ao anatin'izany:
Lahatsoratra sy doka amin'ny Facebook
Rakotra horonan-tsary Facebook - ity fitaovana maimaimpoana ity dia tsy mila famandrihana!
Lahatsoratra sy doka amin'ny Instagram
Lahatsoratra sy doka amin'ny LinkedIn
Lahatsary sy doka Youtube
Ny sehatra dia misy sary sy modely stock vonona handeha amin'ny Business, Real Estate, Marketing, Travel, E-commerce, ary koa ny Gaming. Azonao atao ihany koa ny mahita horonan-tsary ho an'ny Daty Manokana, Lohataona, Paka, Fetin'i St. Patrick, Fetin'ny mpifankatia, na Andro Lalao.
Ataovy izao ny horonantsary Promo.com anao:
Mamorona horonantsary Promo.com
Tags: PROMOpromo.comdoka ara-tsosialyhoronan-tsary
Model89: Rindrambaiko AI marketing ho an'ny doka nomerika
Privy: Mora ampiasaina, endri-javatra mahery vaika amin'ny fahazoana mpanjifa eo an-toerana